(1) Essential oils (or) Aroma compounds
► Fragrance Notes
အားလုံး သတိထားမိလားတော့ မသိဘူး။ ရေမွှေးတခုရဲ့အနံ့ဟာ စစွတ်စွတ်ချင်းအနံ့နဲ့ နည်းနည်းကြာရင် ရတဲ့အနံ့နဲ့ မတူပါဘူး။ ရေမွှေးတခုစီမှာ အနံ့ Level သုံးဆင့် ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကို Notes လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Top Note ဆိုတာ ရေမွှေးစွတ်စွတ်ချင်း ထွက်တဲ့အနံ့ကို ခေါ်တာပါ။ Middle Note ကတော့ ဒုတိယမြောက်ထွက်လာတဲ့ အနံ့ပေါ့။ သူ့ကို တနည်းအားဖြင့် Heart Note လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Base Note ကတော့ နည်းနည်းပိုကြာလာရင် ရလာတဲ့အနံ့ပါ။ သူကစွတ်ပြီး မိနစ် ၃၀ကျော်ကျော်လောက်နေမှ ရတတ်ပါတယ်။ Middle note နဲ့ Base note ကို ရေမွှေးတခုရဲ့ အနှစ်သာရလို့ ပြောလို့ရတယ်။
► My Favorite
ကန်ဒီကြိုက်တဲ့ ရေမွှေးနှစ်ခု ပြောပြမယ်။
Posted by Candy at 12:06 PM
အကိုကတော့ မဒမ်လွင်ပြင်ဝယ်ပေးတဲ့ ရေမွှေးပဲ အကြိုက်ဆုံး
ကန်ဒီက ရေမွှေးအကြောင်းတော်တော်လေး သိတာပဲနော်
victoria secret ရေမွှေးကိုကြိုက်တယ်ဗျ
အာဟိ မိုးသူတို့ လဲ ကြော်ငြာဝင်ဒါကွ ခိခိခိခိ :P
ချိုချဉ်ရေ ... မရောက်ဖြစ်တာလည်း ကြာပြီ ....
ရေမွှေးအကြာင်း မသိသေး တာတွေ အများကြီး သိခဲ့၇လို့ကျေးဇူးပါ ... ။
အဟမ်း အဟမ်း...ညီမလေးရေ မမကတော့ အမျိုးသမီးရေမွှေးဆိုရင် ((အိန်ဂျယ်)) တံဆိပ် အကြိုက်ဆုံး။ အမျိုးသားရေ မွှေးကတော့ အိမ်က အိမ်ဦးနတ် ကိုယ်သင်းနံ့လေးဘဲ အကြိ်ုက်ဆုံး။ သဘာဝ ရေမွှေး...အဟီး...ဘယ်ရမှာတုန်း လွင်ပြင်လှိုင်း ..မိုးသူ....တို့ကို အားကျလို့ ကြော်ငြာ ပြန်ဝင်တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမလေး။။
အိမ်မက်ကတော့ ရှာတုန်း..ခက်တာက ယောက်ျားလေးသုံးတဲ့ ck ကိုကြိုက်နေလို့ ဟိ စွတ်မိရင် ကောင်လေးတွေက ကြည့်ကြတယ် ..ရှင်မတောင် သနပ်ခါးနံ့လိုရေမွေးမျိုး အနံ့ရဖူးတယ် ဘာအမျိုးအစားမှန်းမသိဘူး..
EDT ဆိုလို့ ငယ်ငယ်ကလက်ဆောင်ရတော့ ဗူးလှလှလေးကို Toilette ဆိုတဲ့စာသားကြောင့် အိမ်သာထဲ သွားထားဖူးတယ် ..ပိန်းပါ့နော်..း)
မကြီးလဲရေမွေးကိုသာသုံးနေတာ (ဘာမှတိဝူး)အဲတာတွေသိရလို့ကျေးဇူးပါ ညီမချောလေးရေ
ရေမွှေးအကြောင်းသိရလို့ ကျေးဇူးပဲ စစ် :)
Miss Dior က ပန်းရောင် အစိမ်း လိမ်မော် အရမ်းကြိုက် :)
လိမ်မော်က ပိုပြီးအနံ့စွဲတယ် ဖြတ်လျှောက်သွားရင် အနံ့ကျန်ခဲ့တယ်..
ကြိုက်ပါတယ် သုံးခဲတယ် အရမ်းစူးလွန်းရင်တော့ ဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူး ခေါင်းကိုက်တယ် အသက်ရှူလို့မရတော့ဘူး လက်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်ပါသေးတယ် စပယ်နံ့လေး)))))၀။
ဒါပေမယ့်လက်ဆောင်ရထားတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် အပြင်ထွက်ရင်ဆွတ်မယ်ဆိုပြီး အမြဲမေ့တယ်း)
ဆိုတဲ့ကားကြည့်ဖူးလား အစ်မ..။ အဲ့ရေမွှေး လိုမျိုးရရင်ကောင်းမယ်.။ ဟီးဟီး.
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ရေမွှေးများ ကွကိုဝယ်မသုံးဖူးဘူး၊
ကို တစ်ခါဆီလားမသိ ဆွတ်ဖူးတယ်...၊ရေမွှေးမသုံး
သောသူ လွတ်တော်တတ်ကြကြေးဆို ကိုယ်တွေလွတ်
နေ့မှလာဝယ်ဆိုတာကတော့ သက်သက် ရထားခ
များကြီးပဲ ဟဟ ပြန်ရောင်း
maycho thein said...
I am using that one also :)